New Generation of Metropolitan: ဘဂ္ဂဒက်တွင် ကန်ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံတန် မီထရို တည်ဆောက်မည်
ဗြိတိသျှ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အကြံပေး ကုမ္ပဏီ (British engineering consultancy firm WS Atkins (ATKW.L) နှင့် အမေရိကန်မှ U.S. project management company Versar (VSR.A) ကုမ္ပဏီတို့သည်လည်း အဆိုပါ စီမံကိန်းအတွက် ဈေးပြိုင် အဆိုပြုချက်များကို စီမံကိန်း၏ အကြံပေးအဖွဲ့ဖြစ်သော French engineering group Systra ထံသို့ တင်သွင်းကြမည် ဖြစ်ကြောင်း ဘဂ္ဂဒက်မြူနီစပါယ် မီဒီယာရုံးမှ ပြောကြားခဲ့သည်။
ကျန်ကုမ္ပဏီ ၆ ခုမှာ အင်္ဂလိပ်ကုမ္ပဏီများ ဖြစ်ကြသောaconsortium of British project managers Halcrow Group၊ Mott MacDonald နှင့် Arup၊ ဂျာမန်ကုမ္ပဏီ Dorsch၊ ဖင်လန်ကုမ္ပဏီ Finnish engineering and consulting group Poyry (POY1V.HE)၊ အီတလီမှ Torno and IECMB နှင့် အမေရိကန်မှ Parsons Brinckerhoff ကုမ္ပဏီတို့ ဖြစ်ကြသည်။
ယခုတည်ဆောက်မည့် မီထရိုလိုင်းသည် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုဒဏ်ကို ခံစားနေရသော ဘဂ္ဂဒက်လမ်းမများ၏ ပြဿနာကို ကြီးမားသော အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ဖြေရှင်းနိုင်ရန် အထောက်အကူပြုမည် ဖြစ်ကြောင်း မီဒီယာရုံး၏ ကြေငြာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ အမေရိကန်တို့ အီရတ်ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်က ကျူးကျော်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း တိုးပွားလာခဲ့သော ယာဉ်စီးရေကြောင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများ အကြီးအကျယ် ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
ဘဂ္ဂဒက်မြို့တော်ရှိ ခရီးသည်အများစုမှာ ဘတ်စ်ကားနှင့် တက်စီများပေါ်တွင်သာ မှီခိုနေရသည်ဖြစ်ရာ ယာဉ်ကြော ပိတ်ဆို့မှုများကြောင့်လည်းကောင်း၊ မြို့တော်တစ်ဝန်းတွင်ရှိသော လုံခြုံရေးဂိတ်များတွင် စီတန်း အစစ်ခံရမှုကြောင့်လည်းကောင်း ခရီးတိုလေးများကိုပင် နာရီပေါင်းများစွာ ကြာအောင် စီးနင်း သွားလာကြရသည်။
မြေအောက်ရထားလမ်း စီမံကိန်းကို ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ်များကတည်းက စတင်ရေးဆွဲခဲ့သော်လည်း အီရန်-အီရတ် စစ်ပွဲနှင့် ပြည်ပ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုများကြောင့် ရွှေ့ဆိုင်းထားခဲ့ရခြင်းဖြစ်ရာ အကယ်၍သာ ဤစီမံကိန်း အောင်မြင်ပြီးစီးပါက စစ်ဘေးဒဏ်သင့် နိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး အကောင်အထည်ဖော်သော မီထရို စီမံကိန်းတစ်ခု ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်နှစ်မှစ၍ အီရတ်တွင် အကြမ်းဖက်မှုများ တစ်စတစ်စ ကျဆင်းလာခဲ့ခြင်းကလည်း ပြည်ပကုမ္ပဏီများကို ဖိတ်ခေါ်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ရန်နှင့် စစ်ကြောင့် ပျက်စီးသွားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ပြန်လည် တည်ဆောက်ခွင့်ပေးရန် အီရတ်အစိုးရကို အခွင့်အလမ်း ရစေခဲ့သည်။
ပထမဆုံး မီထရိုလိုင်းသည် ၂၁ ကီလိုမီတာ (၁၃ မိုင်) ရှည်လျားပြီး ဘူတာရုံ ၂၁ ပါဝင်မည်ဖြစ်ကာ ဘဂ္ဂဒက်မြို့လယ် al-Mesbah အရပ်မှ စတင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် အဆိုပါလိုင်းသည် မီထရို လိုင်းခွဲငယ် ၂ ခုအဖြစ် ထပ်မံခွဲသွားမည် ဖြစ်သည်။ လိုင်းငယ် တစ်ခုသည် ဘဂ္ဂဒက်မြို့ အနောက်ပိုင်း Weshash တွင် အဆုံးသတ်မည် ဖြစ်ပြီး ကျန်လိုင်းငယ်တစ်ခုမှာ အနောက်တောင်ဘက်ရှိ Bayaa ဧရိယာကို ချိတ်ဆက်ပေးမည် ဖြစ်သည်။
ဒုတိယမြောက် မီထရိုလိုင်းမှာ ၁၈ ကီလိုမီတာ (၁၁.၂ မိုင်) ရှည်လျားပြီး ဘူတာရုံ ၂၀ ပါရှိမည် ဖြစ်သည်။ ထိုလိုင်းသည် ဘဂ္ဂဒက်မြို့ အရှေ့မြောက်ဘက် Sadr City ခရိုင်မှ စတင်ကာ ဘဂ္ဂဒက်မြို့လယ်ကို ဖြတ်၍ မြောက်ပိုင်းရှိ Adhamiya ဧရိယာတွင် အဆုံးသတ်မည် ဖြစ်သည်။
အော်၊ အီရတ်တောင် ပြာပုံက ထလာဘီ ...
တိုနိုင်ငံမှာတော့ ပြာပုံထဲ ပိုပိုတိုးဝင်နေလေတော့၊ ဘယ်တော့များမှ မက်ထရိုဆိုတာမြင်ရပါ့မလဲ ... ဒီတသက်မှီပါတော့မလား ...
MyMetro June 2, 2010 at 1:25 AM
လူတစ်သက် မပြောနဲ့၊ ဘုရားသခင်တောင် ငိုသွားမယ်...။ သူတောင် မှီမှာမဟုတ်ဘူး...း)
mg July 16, 2010 at 4:50 PM
မြန်မာနိုင်ငံမှာရော Metro ဆောက်လို့ရမယ့်အခြေနေရှိပါသလား?ဆောက်လို့ရနိုင်တယ်ဆိုရင် ယနေ့ချိန်ထိ ဘာကြောင့် မဆောက်သေးတာလဲ?လူကြောင့်လား ငွေကြောင့်လား နည်းပညာကြောင့်လား ဘာအခက်တွေရှိနေပါသလဲ?သိရှိရင် ပြောပြစေလိုပါသည်
MyMetro July 17, 2010 at 2:23 PM
မြန်မာပြည်မှာလဲ Metro ဆောက်လို့ရမယ့် အခြေအနေရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီနေ့ထိမဆောက်သေးတာလဲဆိုရင် တခြားနိုင်ငံတွေလို သယ်/ပို့ပြဿနာ အရမ်းမဆိုးသေးလို့ အရေးတကြီး မစဉ်းစားကြသေးတာပါ။ လူအရင်းမြစ်၊ ငွေနဲ့ နည်းပညာ သုံးခုလုံး ရှိနေရင်တော့ ကိုယ်တိုင်ဆောက်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရေးအကြီးဆုံး ငွေရှိရင် ကျန်တဲ့နှစ်ခုမရှိလည်း သူများကိုခေါ်ပြီး ဆောက်ခိုင်းလည်း ရတာပါပဲ။
မြန်မာပြည်မှာ Metro မပြောနဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကိုတောင် ဝယ်နိုင်တယ်... အားလုံးပြည့်စုံပြီးသား... ကိုယ့်အိမ်မှာတောင် ဘာလိုတယ်၊ ဘာလုပ်သင့်တယ် ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိတယ်။ ဒါတွေပြောရင် ဒေါတွေပါလာလိမ့်မယ်... Metro ဆောက်နိုင်အောင် ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေမှာ တာဝန်ရှိတယ်... စဉ်းစား~~~~ စဉ်းစား....
Unknown July 16, 2011 at 10:02 PM
မြန်မာပြည်မှာ မက်ထရိုဆောက်ဘို့ထက်....ကျောင်းသားတွေ စာကျက်ဘို့
လျှပ်စစ်မီးပုံမှန်ပေးဘို့ အယင်ကြိုးစား...ဒီကျောင်းသားတွေ နိုင်ငံတကာနဲ့
ဒီအချိန်မှာ သစ်တောတွေ တွင်းထွက်တွေ အကုန်ကုန်လို့..ငွေပြတ်နေလောက်ဘီ.
Wai Min November 11, 2011 at 4:12 AM
မျှဝေပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ဒါတွေကိုအပြင်မှာ.တကူးတက ဖတ်ရဖို့
Wai Min November 11, 2011 at 4:14 AM